Vivo V11 Pro kuongororwa: Top-notch kamera yefoni pamwe nekugadzirwa kwakasiyana uye kuchengeteka
Vivo V11 Pro ndeimwe yepamunyanzvi pakati pekombiyuta foni mumushamba weIndia.KVN Rohit / IBTimes India
Vivo yakagadzira zvakasimba mukuzviisa pachake semasimba ekuverenga pamwe nemhizha ye smartphone. Pakutanga, kufanana nemamwe makambani eChina, akanga akaiswa sekhopikisi yeApple, asi, kwete. Yakasvika yepakutanga yakagadzirwa mutauro uye yakakwira kamera Vivo Nex uye akaunza kuchinja mune-screen fingerprint sensor in Vivo X21dzakatevedzana.
Pakutanga mumwedzi, kambani yakaunza mitambo yakafanana-kuchinja foni V11 Pro nemvura inodonha kuratidza kugadzirwa uye in-inoratidza biometric sensor. Asi, usakanganisa; kune zvakawanda zvakawanda zvekupa kune zvimwe kunze kweizvi zvataurwa pamusoro pezvinhu zviviri zvinokosha.
Ndanga ndichiri kushandisa iyo Vivo V11 Pro kwemavhiki anopfuura maviri uye zvaive zvakaratidzwa kwandiri. Hezvino zvandaida pamusoro pechirongwa ichi.
Kugadzira, kuratidza uye kuvaka chimiro:
Sezvo kune chivakwa chekuvaka chiri kunetseka, chinouya nechemberi polycarbonate based shell uye chifukidzo chegirasi pamusoro, iyo inenge yakasununguka inonzi premium inonzwa. Ndaifarira kufamba kwakasvibira kumushure uye zvinoshamisa, zvigunwe zveminwe zvisinganyanyi kuonekwa muhomwe yangu yekuongorora (yegoridhe inotyisa). Chimiro chakakomberedza mitsara ine ganda rinopenya pamusoro pavo. Mitsetse yakagadzirisa inopa kubata kwakanaka kuti ruoko rubatisise uye ini ndinokoshesa kambani yekupa pachena chinyorwa chevhavha nebhokisi rekutengesa.
Vivo anoisawo chimwe chekuchengetedza chinyorwa pamusoro pechiratidziro zvakare, ichi chifambiso chekugamuchira, izvo zvinokwikwidzana zvinowanzoita zvisingaiti.
Vivo V11 Pro inopisa full HD + (2340x1080p) yakakura AMOLED-based FullView Display 3.0 neKINIVXD kivharo chegirazi pamusoro. Sezvandakataura mumutambo wokutanga, kuverenga kwacho pachivako muzuva rakananga rakanaka. Kusvikira nhasi, ini handina kutarisana nekushungurudzika mumaziso angu apo ndichiona kana kuverenga pachikona.
Vivo V11 Pro inouya nekwakadzika kumativi akadzingiswa uye yakasvibira girazi rekuvhara pamusoro pekuwedzera exuding premium kunzwa.KVN Rohit / IBTimes India
Vivo V11 Pro inouya ne (kuruboshwe kuenda kurudyi) 3.5mm audio jack, mic mic micro-bB port uye imwe gavhuna grille pamucheto.KVN Rohit / IBTimes India
Vivo V11 Pro inouya nechando chepamusoro pamusoro-soro ne mic.KVN Rohit / IBTimes India
Vivo V11 Pro inouya neSIM tu tray kuruboshwe rwemuchetoKVN Rohit / IBTimes India
Vivo V11 Pro inouya nekwesimba simba uye vanyori vemaoko vanoisa imwe yepamusoro kune imwe kurudyi rwemucheto.KVN Rohit / IBTimes India
Vivo V11 Pro inouya neQualcomm Snapdragon 660 octa-core yakatsigirwa ne-6GB RAM uye 64GB kuchengetedza, iyo inogona kuwedzerwa kusvika ku256GB kuburikidza ne microSD card. Munguva yose yekuedzwa, yakashanda pasina chero chiratidzo chekugadzirisa, kunge iri iyo kubudiswa kwemapurogiramu, kuzarura kamera, kutamba mitambo, hongu kunyange Asphalt 8, yakange iri mamiriro ekunze. Kunyange zvazvo yakazodziyirwa mushure mokunge nguva yakareba yemitambo uye yevhidhiyo kutamba, haina kumbopfuura pamusoro pekunyaradza kwangu.
Ndakaedzawo mabhizinesi mapurogiramu paVivo V11 Pro uye yakawana 1,28,893 paAnTuTu uye paGebenbench v4.3.0, yakawana 1,444 uye 5,469 pikiso pane imwe chete-core uye yakawanda-inongedzo.
Vivo V11 Pro performance benchmark resultsKVN Rohit / IBTimes India
Sezvo kune iyo inonyoresa inofunganya, iyo Android 8.1 Oreo-kubvisa Funtouch OS yakanga isiri iyo inonakidza ini ndichiishandisa nayo. Asi, ichi chinhu chinonyanya kutenderwa, sevamwe vashandisi vatove vadzidzisi veVivo phone uye kana vakaikuridzira kuV11 Pro, havazovi nedambudziko rekufamba nenzira ino. Asi kwandiri, uyo anoshandisa mafoni akawanda eIndaneti kuti aite kudzokorora, anofanira kutarisana nguva dzose pandinotora imwe itsva. Ita kuti, pane zvinhu zvishomanana zvinokosha zvakadai sevana Kids uye i-Manger yandinoda. Asi, ndichasiya izvi kune uyo anotarisira muridzi wega kuti asarudze asati atenga V11 Pro.
Ita kuti, Ndine simba rakashamiswa ne-in-screen fingerprint sensor. Kunyange zvazvo kukurumidza kwayo kwechipiri-yechipiri kunonoka kudarika iyo yakanyatsoona, mifananidzo yemagetsi matsvuku achipfuura nepakati pemakwikwi achiona achizadza.
Vivo V11 Pro's face open and the fingerprint in-screen works fast enough to my standards and also has low False Rejection Rate (FRR) .KVN Rohit / IBTimes India
Uyezve, pasinei nekadiki nzvimbo inowanikwa yekamberi, Vivo V11 Pro's Face Unlock feature inoshanda neChirwere Reject Rate (FRR) shoma. Iyo kambani yakaita basa rakanakisisa rokudzidzira nounyanzvi sens sensor neyekukurukurirana kumusoro pasina kuchinja huwandu hwekugadzira foni.
Kunze kwemutauro wekugadzira uye mu-screen-screen fingerprint, kamera ndiyo yakawanda yakandibaya. Pamberi pekutanga uye iyo yepamusoro-maviri-kamera kumashure inotora mifananidzo inoshamisa mumamiriro ezvinhu akajeka ekudzivirira kwezuva uye zvakare zvinoshamisa mumamiriro ezvinhu akaoma mukati memazuva ane mwenje. Kunyangwe ruzha runotanga kupinda mukati mekunze kwemahara, nzvimbo yacho inopa humwe nyaradzo mukutora pedyo-mifananidzo yakaoma. Uyewo, ruoko runofanira kusimbiswa kuti ruwane mufananidzo wakaisvonaka weusiku. Zvisinei, chokwadi chinofanira kuudzwa, Vivo V11 Pro inopa mukana wakanaka wekuona mafirimu mu-sub-Rs 30,000.
Kune avo vasingazivi, Vivo V11 Pro inouya ne-feature-rich 12MP + 5MP kaviri khamera kumashure ne LED flash, full HD video kurekodi, ultra HD, PPT, Professional, Slow Motion, Photography-Lapse Photography, Camera Filter, Live, Bokeh, HDR, AI Face Kunaka, Panorama, Palm kugadzirisa, Gender detection, Retina Flash, AR Stickers, AI Face Shaping, YakagadziriswaAI Selfie Lighting, AI Scene Recognition, Google Lens uye AI Mufananidzo Kurema
Pamberi payo, ine mhando inofadza 25MP snapper neboka selfie feature, AI Face Beauty, Portrait Mode nechiedza chechisikigo, studio chiedza, stereo chiedza, chiedza chechiedza, rainbow light uye monochrome background.
Tarira kunze kwezvinhu zvinoshamisa zvakaitwa neVivo V11 Pro:
Vivo V11 Pro primary camera sampuli inotorwa mangwanani.Ken Sunny / IBTimes India
Vivo V11 Pro primary camera sampuli yakatorwa mumangwananiKVN Rohit / IBTimes India
Vivo V11 Pro primary camera samples taken in the morningKen Sunny / IBTimes India
Vivo V11 Pro primary camera sampuli yakatorwa masikati.Kana Sunny / IBTimes India
Vivo V11 Pro primary camera sampuli yakatorwa mumasikati makuru.KVN Rohit / IBTimes India
Vivo V11 Pro primary camera sampuli yakatorwa masikati.KVN Rohit / IBTimes India
Vivo V11 Pro primary camera sample taken in the night with LED flashKVN Rohit / IBTimes India
Vivo V11 Pro camera sampimusi yakatorwa masikati.KVN Rohit / IBTimes India
Vivo V11 Pro kamera sampuli yakatorwa mumamiriro ekudzivirira chiedza.KVN Rohit / IBTimes India
Vivo V11 Pro sampera kamera yakatorwa mambakwedza.KVN Rohit / IBTimes India
Vivo V11 Pro camera sampuli yakatorwa mumangwananiKVN Rohit / IBTimes India
Vivo V11 Pro kamera sampuli yakatorwa mumanheruKVN Rohit / IBTimes India
Vivo V11 Pro sampera kamera yakatorwa mumazuva masikati makuruVVN Rohit / IBTimes India
Kunze kwekhamera, hupenyu hwebheteri hwakanga hwakashamisa kwandiri. Vivo V11 Pro inouya ne 3,470mAh cell uye tichionga zvakanyatsogadzirwa software; yakakwanisa kupedza nguva inopfuura rimwe zuva nguva dzose.
Uyewo, chigadziro pasinei nekugara micro micro port, yakakwanisa kutengesa nokukurumidza kupfuura chero ipi zvayo yefoni inowanzogadzirwa nehurumende imwechete. Chii chinoita kuti Vivo V11 Pro standout ndeyokuti ine Dual-Engine Fast Charging teknolojia. Inowanikwa zvizere kubva ku zero kusvika ku100 per cent muzasi kwehafu nehafu yeawa.
Tichifunga nezvezvinhu zvose, Vivo V11 Pro inonyatsotaridzika pakati pese foni uye inoita kururamisira kumutengo, inorayira. Asi, nekusvika kwePoco F1, Vivo ichava nenguva yakaoma inogutsa vashandisi yekuisa mari paV11 Pro.
Ndataura izvozvo, ndichiri kukurudzira V11 Pro kune vatengi, sezvo inopa makamera hardware anoshamisa, mutauro unoshamisa uye unotakura bheteri. Uyewo, in-screen-fingerprint sensor inoita mutambo-kuchinja unhu husina humwe mabhizimisi anokwikwidzana anopa chinhu ichi mumusika iye zvino uyewo chiri pasi peRs 26,000 mutengo-wezera.
Zvechokwadi inotonhora mu-screen fingerprint sensor
Kunze kwekunaka kamera hardware
Yakanaka zvikuru mutauro
Chimiro chekugadzirisa (6GB RAM + 64GB kuchengetedza nechisarudzo chekuwedzera)
Zvitatu zvakatsaurirwa nzvimbo dze SIMS mbiri (rudzi: nano + nano) uye imwe microSD card
Kuvaka unhu hungave huri nani pamutengo wayo, asi hausi mutengo wekutengesa semutauro wakanaka wekugadzirisa uye chidziviriro chekuvhara-shell chinouya nebhokisi rekutengesa rinokonzera kukanganisa uku.
Vivo V11 Pro iri kugoverwa muDazzling Gold uye Starry Night Black mavara akasiyana. Vashandi vanofarira vanogona kuzviwana pane zvose zviri muIndaneti zvakadai seAirtel Store, Vivo e-Store, Amazon, Flipkart, Paytm Mall, uye Snapdeal uye zvidhinha-uye-zvinyorwa zvigadzirwa, zvakare.
Zvinyorwa zvinokosha zveVivo V11 Pro:
mhando Vivo V11 Pro
kuratidza 6.41-inch yakazara HD + (2340x1080p) super AMOLED-based FullView Ratidza 3.0 neCNIX yegirazi chevhiri
chengetedzo 6GB kuchengetedza, yakawedzerwa kusvika ku256GB
Main: 12MP (F1.8) + 5MP (F2.4) sensors ne LED flash, full HD video kurekodi, Ultra HD, PPT, Professional, Slow, Time-Lapse Photography, Camera Filter, Live, Bokeh, HDR, AI Face Run, Panorama, Palm capture, Gender detection, Retina Flash, AR Stickers, AI Face Shaping, Time Watermark, AI Selfie Lighting, AI Scene Kuzivikanwa, Google Lens, AI Mifananidzo Kutema
Pamberi: 25MP (F2.0) neboka selfie feature, AI Face Runako, Mifananidzo yeChiratidzo nechiedza chechisikigo, chiedza chema studio, chiedza che stereo, chiedza chechiedza, chiedza chebowara uye monochrome background
bhatiri 3.400mAh neDual-Engine Fast Charging teknolojia (18W)
Wedzera-ons Nhamba mbiri dzeSIM + imwe microSD card, In-screen mifananidzo yeminwe, chiso chekuvhara mufananidzo IR sensor, Bluetooth 5.0, Wi-Fi (2.4GHz / 5GHz), USB 2.0, OTG, A-GPS / GLONASS / Beidou,
miganhu X X 157.91 75.08 7.9 mamirimita
Colors Starry Black and Dazzling Gold
mutengo Rs 25,999.
Vivo V15 Pro kuongororwa: Mid-range foni ine top-notch kamera, high-tech kuchengetedza zvinhu
Vivo X60 yakateerana inotangisa muIndia, inoratidzira ZEISS optics uye chaiyo RAM: Mutengo, Specs, Kuwanikwa
Vivo X Cherechedzo Maoko-Pa: Iyo 7-inch skrini ine OriginOS inogadzirira chiitiko che-off-beat.
Vivo V11 ne 25MP AI-selfie kamera yakatangwa muIndia: Zvose zvaunoda kuziva
Vivo X50 nhepfenyuro yakazarurirwa neGimbal Kamera System, 120Hz kuratidza, uye Snapdragon 865
Vivo V15 Pro yekutanga kufungidzira: Dhizaini-inobata dhizaini ine-yakasarudzika kamera
Filed Under: fotografia kuvat